NMN အမှုန့် - ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံပေးသွင်း
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / β-Nicotinamide Mononucleotide
rating: အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw သည်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သော NMN Powder ကို CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အမြောက်အများထောက်ပံ့ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျမ်းမျှလစဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်။ ပိုမိုဝယ်ယူရန်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အထုပ်များယူနစ်: 1kg / အိတ်, 25kg / စည်
ထုတ်ကုန်အမည် β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
CAS အရေအတွက် 1094-61-7
Nicotimide mononucleotide ။
သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် 2-8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
AD NAD + သည်အသက်နှင့်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစုဖြစ်သည်။
AD NAD + အဆင့်များသည်အထူးသဖြင့်၎င်း၏ NAD + ပုံစံသည်တစ်ရှူးများစွာတွင်အသက်အရွယ်နှင့်အမျှသဘာဝကျသည်။
♣ခန္ဓာကိုယ်က NMN ကို NAD + အတွက်အလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်“ ရှေ့ပြေး” အဖြစ်ဖန်တီးသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် NMN level မြင့်လေ NAD + level ကိုဆိုလိုတယ်။
မှတ်ချက် - အောက်ပါဆောင်းပါးတွေမှာβ-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အစား NMN ကိုသုံးတယ်။
Nicotinamide Mononucleotide: အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးပြုမှု
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းသည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အလှကုန်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၏ပထမဆုံးလက္ခဏာများသည်မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းတွင်အစက်အပြောက်များနှင့်အရေးအကြောင်းများဖြစ်လာသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၏အလှကုန်ပစ္စည်းများသည်ကြာရှည်စွာယားယံခြင်းနှင့် ၀ က်ခြံများဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိုးရိမ်သောကများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများအပြင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့သော exogenous အချက်များကြောင့်မကြာခဏပုံကြီးချဲ့ကြသည်။
ဤအရေးအကြောင်းများသည်အပြင်ပန်းအားဖြင့်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုမြင်နိုင်သောလက္ခဏာသာဖြစ်သော်လည်းအတွင်း၌၎င်းတို့သည်ယခင်ကကဲ့သို့စိတ်ထက်သန်မှုနှင့်စွမ်းအင်တို့ဖြင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး၊ မကြာခဏ basal metabolism နှုန်းနှေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် mitochondrial metabolism လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုအများစုသည်သက်ရှိအားလုံးတွင်တွေ့ရသော homeostasis နှင့် metabolism အတွက်အရေးကြီးသော coenzyme ကျဆင်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလအတွင်းဤ coenzyme သည် mitochondrial စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်တုံ့ပြန်မှုအားလုံးနီးပါးတွင်ပါဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်၌များပြားစွာတွေ့ရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ NAD+ အဆင့်များသိသိသာသာကျဆင်းလာသည်။
အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအားဖြည့်ဆေးများကိုကျယ်ပြန့်စွာမြှင့်တင်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများကအိုမင်းခြင်းကိုသက်ရောက်မှုကိုတန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်ခန္ဓာကိုယ် NAD+ အဆင့်ကိုမထိခိုက်သောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ လေ့လာမှုများစွာ၏ရလဒ်အဖြစ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများသည်အိုမင်းခြင်း၏လက္ခဏာများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အဖြေရှာခဲ့သည်၊ ပါးစပ်စားသုံးပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှ NAD+ သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide Mononucleotide သည် niacin (သို့) ဗီတာမင် B3 မှရရှိသော avocados နှင့် edamame ကဲ့သို့အချို့သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ NMN သည်မကြာသေးမီက David Sinclair ရေးသားသော Lifespan စာအုပ်၏ရလဒ်အဖြစ်အများအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်အားတစ်ခုအဖြစ်ဆွဲငင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
NAD+ သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၏အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်လူသိများပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အဆင့်များပေါ်ရှိအသက်အရွယ်၏သက်ရောက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်မှာခက်ခဲသည်။ အများအားဖြင့်ကန ဦး လေ့လာမှုများသည် NAD+ အားဖြည့်ဆေးများကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ NAD+ အဆင့်များတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် NAD+ တွင်ခန္ဓာကိုယ်၌စုပ်ယူမှုအားနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်၎င်းအား exogenously စားသုံးခြင်းသည်၎င်း၏ endogenous အဆင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
NMN ဖြည့်စွက်သည် NAD+ ၏အစွမ်းထက်ရှေ့ပြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်၌စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ သို့သော်လည်း NMN အမှုန့် (သို့) ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ဆေးအဖြစ်သုံးရန်ပထမဆုံးသုတေသနကို ၂၀၂၀ တွင်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ NMN သည်သုတေသနလောကတွင်သွားရန်ခရီးရှည်ကြီးကျန်သေးသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအပေါ် NMN ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သက်ရောက်မှုများ
NAD+ အဆင့်များကို၎င်း၏အထက်အရေးကြီးသောရှေ့ပြေးနှစ်ခုဖြစ်သော NMN သို့မဟုတ် NR တွင်အထက်တွင်ဖော်ပြနိုင်သည်။ NMN နှင့် NR တို့သည် NMN သို့ NR သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ယခင်စုပ်ယူမှုအတွက်အရေးပါသည်။ NR သည် endogenous NAD+ အဆင့်ကိုသိသိသာသာမြင့်တက်စေသော Nicotinamide riboside ကိုဆိုလိုသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကိုဆန့်ကျင်ရန် NR နှင့်ဖြည့်စွက်အားဖြည့်မှုများကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့လာခဲ့ပြီး NR အားလုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအားဖြည့်ဆေးများအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
သွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်း NMN သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း DNA ပြုပြင်ခြင်းတို့တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ NMN သည်ဆယ်ယူရေးလမ်းကြောင်းမှတဆင့်၎င်း၏ချို့တဲ့မှုကိုကျော်လွှားရန်ခန္ဓာကိုယ်၌ NAD+ ၏ပေါင်းစပ်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးသည်။ NAD+ ကိုနည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပေါင်းစပ်ပြီးဆယ်ယူနိုင်သောလမ်းကြောင်းသည် NMN ၏မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည် NAD+ ကိုပျက်စီးစေသောလမ်းကြောင်းများဖြစ်သော Niacinamide သို့မဟုတ် NAM ကဲ့သို့ NAD+ ပြိုကွဲစေသောလမ်းကြောင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ NAM သည် NMN သို့တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းပြီးနောက်၊ အဆင့်အမျိုးမျိုးမှတဆင့် NAD+ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၌ NMN ၏အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး NMN အားဖြည့်ဆေးများ 'လူကြိုက်များလာခြင်း၏နောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
သင် NMN အားဖြည့်ဆေးများကိုပါးစပ်မှသောက်လိုက်သောအခါ NMN ဒြပ်ပေါင်းများသည်ဆဲလ်များထဲသို့မ ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည် NR သို့အသွင်ပြောင်းသွားသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ NR သည်ဆဲလ်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးနောက်၎င်းအားတိကျသောအင်ဇိုင်းတစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတစ်ဆင့် NMN သို့ပြန်ပြောင်းသည်။ nicotinamide ribose kinase (သို့) NRK ဤ NMN သည် NAD+ ၏ biosynthesis အတွက်လူသား၏နောက်ဆုံးအဆင့်များကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် NAD+ ကိုလက်ခံသည်။
NMN ဖြည့်စွက်အားဖြင့် NAD+ အားဖြည့်ခြင်းသည်စွမ်းအင်တိုးစေရုံသာမက NMN ဖြည့်စွက်စာကိုပါ ၀ င်စေသောအခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်ကိုဤနေရာတွင်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
NMN ၏အိုမင်းရင့်ရော်မှုဂုဏ်သတ္တိများသည် NAD+ အဆင့်များတိုးလာခြင်း၏ရလဒ်သာမဟုတ်ဘဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ NMN ၏လမ်းကြောင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ NMN ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးသည် NAD+ အာနိသင်ရှိသောကြောင့်ဆယ်လူလာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် NMN ဖြည့်စွက်စာသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဟုတ်၊ မဟုတ်အထူးသဖြင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
NAD+ အာနိသင်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းသည် NMN ကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်လုပ်စေသည်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကတည်းကအဝလွန်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုသည်သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဤအနှစ် ၃၀ အတွင်းကလေးဘဝအ ၀ လွန်နှုန်းသည်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်သင့်အားသေစေနိုင်သောအခြား comorbidities များသို့ ဦး တည်စေသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများတွင်တွေ့ရများသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သောအဝလွန်ခြင်း၏နောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုသည် ဤအဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းများနှင့်အတူဆာလောင်မှုဟော်မုန်းများကိုပစ်မှတ်ထားသောဘက်စုံပါ ၀ င်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကာတာတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရတိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင် NMN ဖြည့်စွက်စာသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတွင်အဓိကဟော်မုန်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ leptin နှင့် sirtuin တို့အသီးသီးရှိသည်။ ဤလေ့လာမှုက NMN ကိုပါးစပ်မှစားသုံးခြင်းသည်သင်ဝိတ်ကျစေရန်ကူညီပေးပြီးအစာခြေဖျက်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေပြီးနှစ် ဦး စလုံးသည်သင်ကြုံတွေ့နိုင်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုချဲ့ကားပေးသည်။
ထို့ပြင်သုတေသီများသည် NMN သည် NAD+ အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးအဆီဆဲလ်များတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အာနိသင်ရှိပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုထပ်မံကူညီသည်။
ဆီးချိုရောဂါသည်အ ၀ လွန်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအ ၀ လွန်ခြင်းကိုစီမံရန်နှင့်ကုသရန် NMN ဖြည့်စွက်စာများကိုသုံးခြင်းဖြင့်ဆီးချိုရောဂါကိုမဖွံ့ဖြိုးစေဘဲကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် NMN ၏တစ်ခုတည်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါ။ NAD+ အဆင့်များကျဆင်းခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအင်ဆူလင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောပန်ကရိယတွင် beta ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သုတေသီများက၎င်းသည်အသက်ကြီးသူများတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကွယ်မှအဓိကရောဂါဗေဒဇီဝဗေဒဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
တိရစ္ဆာန်ပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရဆီးချိုရောဂါနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် NMN အားဖြည့်ဆေးများကိုပေးသောအခါ beta-cell function ကိုတိုးတက်စေသည်။ အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ အတွက်ကုသမှုပစ်မှတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရာတွင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ NMN ဖြည့်စွက်စာများသည်အသည်းကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အဆီဓာတ်တိုးစေနိုင်သောအလားအလာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆီသိုလှောင်မှုကိုလျော့ကျစေပြီးခန္ဓာကိုယ်၌ဂလူးကို့စ်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
NMN ဖြည့်စွက်စာများသည်၎င်းတို့သည်ဂလူးကို့စ်ခံနိုင်ရည်နှင့်အင်ဆူလင်ခုခံအားကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အသက်ကြီးသူများတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ ကိုစီမံရန်ကူညီသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောအခြားဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုထိရောက်စွာသက်သာစေရန်အလားတူလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
NMN နှင့်ဖြည့်စွက်စာသည်မကြာသေးမီကမှသုသေသနပြုသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်၊ အနည်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင် NMN ၏အခန်းကဏ္ COVID ကို COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာခဲ့သည်မှာအံ့စရာမဟုတ်ပါ။
multitasking coenzyme ၏ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္များကိုလေ့လာနေစဉ် NAD+သည်သုတေသီများသည်ခုခံအားစနစ်၏သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်သုတေသီများအား NMN ဖြည့်စွက်မှုများအကြားသီးခြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်၊ NAD+ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်၏သက်ရောက်မှုများကိုခုခံရန်ခုခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ NAD+ အဆင့်များလျော့နည်းလာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှပြင်းထန်သောကူးစက်မှုပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဤလူနာများသည် COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့် comorbidity နှင့်သေဆုံးနိုင်ခြေပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကြောင့် NMN ဖြည့်စွက်စာသည် COVID-19 သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းထန်မှုကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ထားသည့်ဇီဝနာရီကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်ပုံစံများပေါ်တွင်ကွဲပြားသောလေ့လာမှုများက NMN ဖြည့်စွက်စာသည်ဤကန့်သတ်ချက်များကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်အသက်အရွယ်ကြောင့်သားမပွားနိုင်ခြင်းကိုပင်ကုသပေးနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သဘာဝအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအမျိုးသမီးကြွက်များအားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ NAD+ အဆင့်များလျော့နည်းလာခြင်းသည်မျိုးပွားနိုင်စွမ်းနှင့်မွေးဖွားမှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့် oocyte အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ NMN ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဤတိရစ္ဆာန်ပုံစံများတွင် NAD+ အဆင့်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဖြင့်မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေသောကြောင့် oocyte နှင့်၎င်း၏နံပါတ်များကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်နှင့်အတူ oocytes ၏အရည်အသွေးကိုလျော့ကျစေသောအရာကိုအတိအကျအကဲဖြတ်ရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုအတွက်အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများမှ oocytes များကိုရောဂါဗေဒဆိုင်ရာနားလည်ရန်အတွင်းကျကျကောက်ယူလေ့လာခဲ့သည်။ NAD+ အဆင့်မညီမျှခြင်းကြောင့် oocyte အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းသည် oocyte အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းကြောင့် oocyte ၏ mitochondrial DNA တွင် point mutations များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန် NMN ဖြည့်စွက်စာသည်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်မျိုးပွားနိုင်မှုနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအမျိုးသမီးများသည်သွေးဆုံးချိန်တွင်၎င်းတို့၏မျိုးပွားနိုင်စွမ်းအများစုဆုံးရှုံးသွားသဖြင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ NMN ဖြည့်စွက်စာများသည်သွေးဆုံးခြင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြန်ပြောင်းစေနိုင်သည်။ ဒါကအမျိုးသမီးတွေကိုမျိုးပွားနိုင်စွမ်းပိုရှည်စေပြီးယေဘူယျအားဖြင့်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတောင်မှ oocytes ရဲ့အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားလာစေပါလိမ့်မယ်။
NMN ဖြည့်စွက်စာ၏ဂုဏ်သတင်းကိုတာဝန်ယူသောဇီဝဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ DAvid Sinclair ၏သုတေသနပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏သွေးကြောများရှိ endothelial ဆဲလ်များသည်အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးကျဆင်းလာသည်။ ၎င်းသည်သွေးကြောများမှဖြတ်သန်းသောတစ်သျှူးများသို့ပို့သောအာဟာရဓာတ်များကိုထိခိုက်စေသည်၊ ထို့ကြောင့်သွေးကြောများ၏အလုံးစုံအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေသည်။ ဤအပြောင်းအလဲများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကိုမြင့်တက်စေသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းဟုယုံကြည်ကြသည်။
NMN ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ် NR ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ရလဒ်များတိုးလာပြီး NAD+ အဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ဤလေ့လာမှုအရ endothelial cells များသည်အဟောင်းများပုံမှန်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သောအခါသွေးကြောအသစ်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အစွမ်းထက်စေသည်။
Neurodegenerative ပုံမမှန်မှုများသည် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေသော၊ ပုံမှန်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဘဝအရည်အသွေးကျဆင်းစေသည်။ NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန် NMN နှင့်ဖြည့်စွက်စာသည်မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၏ရှင်သန်နိုင်မှုကိုတိုးတက်မြင့်မားစေသည်ဟုယုံကြည်သည်။
စိတ်ဒဏ်ရာရစေသော ဦး နှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် neurodegeneration ရှိသောတိရစ္ဆာန်ပုံစံများကိုတိကျတဲ့ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုပေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် P7C3-A20၊ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးတက်စေပြီး neurodegenerative ဖြစ်စဉ်များကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
P7C3-A20 သည် NMN ထုတ်လုပ်သောဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပြီး NAD+ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကြွက်များကို TBI ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်အမြှေးပါး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သွေးနှင့် ဦး နှောက်အတားအဆီး၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံခိုင်မာမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူတို့၏ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေလိုသောအားကစားသမားများသည်ဤဖြည့်စွက်များသည်၎င်းတို့၏ aerobic စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သောအလားအလာရှိသည်ကိုမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် NMN အားဖြည့်ဆေးများကိုသုံးသင့်သည်။ NMN ဖြည့်စွက်စာများ၏အကျိုးကျေးဇူးသည်အများအားဖြင့်ကြွက်သားများတွင် NAD+ ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းဤအားကစားသမားများသည်သူတို့၏ကြွက်သားများအောက်ဆီဂျင်စုပ်ယူမှုပမာဏသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ငါ NMN အမှုန့်ကိုယူသင့်သလား။
NMN အမှုန့်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပြီးတိရိစ္ဆာန်ပုံစံများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုလူသားများအားလေ့လာခဲ့ပြီးကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ သင်ကခံနိုင်ရည်ကျဆင်းခြင်း၊ အားကစားစွမ်းရည်၊ သို့မဟုတ်အလှပြင်လက္ခဏာများတွင်ဖြစ်စေအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းလက္ခဏာများကိုစတင်တွေ့ရှိပါက NMN ဖြည့်စွက်စာများသောက်သုံးခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်ပါသည်။ သူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုလက္ခဏာများကိုပြောင်းပစ်ရန်အထူးအကြံပြုသည်။
NMN သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိရသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ NMN ကို NMN ပေးသွင်းသူမှစနစ်တကျထုတ်လုပ်ပြီး NMN အမှုန့်စက်ရုံနှင့်သင့်အိမ်တွင်စနစ်တကျသိုလှောင်သောအခါလူသားစားသုံးမှုအတွက်လုံးဝလုံခြုံသည်။ NMN အမှုန့်သိုလှောင်မှုသည်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းကိုပူသောနေရာတွင်သိုလှောင်ပါက၎င်းသည် niacinamide အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးသင်စားသုံးသောအခါသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းအဆိပ်ဖြစ်လာစေသည်။
NMN ကုမ္ပဏီမှစင်ကြယ်သော NMN အမှုန့်ကိုအေး။ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်အမြဲသင့်တော်စွာသိုလှောင်ထားသောကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ထို့ပြင် NMN အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများသည်ပြင်းထန်သောနောက်ဆက်တွဲများမဖြစ်ပေါ်စေဘဲ၎င်းတို့ကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးသုံးရမည်ကိုသိနိုင်ရန်ဖြည့်စွက်စာများ၏ထုပ်ပိုးမှုတွင်အတိအကျအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်နှင့်သိုလှောင်မှုကိုပုံနှိပ်သည်။
NMN အားဖြည့်ဆေးများကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည်လိုချင်သောအာနိသင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြည့်စွက်စာများ၏စွမ်းရည်ကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်ဟုသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကဲ့သို့ NMN အကျိုးကျေးဇူးများလျော့နည်းသွားခြင်းကိုသတိပြုမိသောအခါဖြည့်စွက်စာများကိုခဏနားရန်အကြံပြုသည်။
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သိုလှောင်ရုံတို့တွင်သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုရှိသဖြင့် NMN အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးအန္တရယ်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။
အကောင်းဆုံး NMN အမှုန့်ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ။
NMN အမှုန့်နှင့် NMN ဖြည့်စွက်စာများ၏အခြားပုံစံများကိုအွန်လိုင်းဆေးဆိုင်များ၊ ကျန်းမာရေးစတိုးဆိုင်များနှင့်၎င်းတို့၏ဒေသတွင်းမိတ်ဖက်များမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စက်မှုအဆင့်နှင့် NMN ဆေးပြားများနှင့်ဆေးတောင့်များထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသောကုမ္ပဏီကြီးများမှအများဆုံး ၀ ယ်နိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်း Amazon သို့မဟုတ် Amazon Prime မှ NMN အမှုန့်ကို ၀ ယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျပန်းရောင်းချသူများစွာသည်လိမ်လည်ခြင်း (သို့) အတုတစ်ခုအတွက်ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပေးချေရန်သင့်ကိုလှည့်စားနိုင်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေး (သို့) သင်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်မကောင်းသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
သင် NMN အမှုန့်တစ်ခု ၀ ယ်မ ၀ ယ်မီသင်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် ၀ ယ်သည်ကိုသေချာစေရန်အနည်းငယ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး NMN ဖြည့်စွက်အားသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဖြစ်သည်။ NMN ပေးသွင်းသူများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အားကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သောအဆိပ်များ (သို့) ညစ်ညမ်းစေသောမည်သည့်အဆိပ်အတောက်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများမဆိုကာကွယ်ရန်အစွမ်းကုန်ဂရုပြုသင့်သည်။
ထို့ပြင် NMN အမှုန့်ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြည့်စွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းထိန်းသိမ်းသင့်သောသင့်တော်သောအခြေအနေများတွင်သိုလှောင်ထားသင့်သည်။
NMN Powder အကြောင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
· NMN အမှုန့်သည်အိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းစေနိုင်သလား။
NMN အမှုန့်သည်အသက်အရွယ်ရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်စာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကြေငြာပြီး၎င်းသည်အသက်အရွယ်ရင့်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုလျော့ကျစေရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ထိုမျှမက NMN အမှုန့်သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါစနစ်များပေါ်ရှိအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုသက်ရောက်စေနိုင်ပြီးသင်၏နုပျိုတက်ကြွသောနေ့ရက်များကိုပြန်ရောက်စေနိုင်သည်။
· NMN အမှုန့်သည်လုံခြုံပါသလား။
NMN အမှုန့်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကဲဖြတ်ရန်နှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့လာထားသည်။ ဤလေ့လာမှုများအတွင်း NMN အသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိကြောင်းပြသရန်ရလဒ်များအတွက်သာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ NMN အမှုန့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောမည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုအတွင်းလုပ်သောလူသားသို့မဟုတ်စာအုပ်မှူးအမှားကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဖြည့်စွက်စာရဲ့အမှန်တကယ်ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
· NMN အမှုန့်ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ။
NMN အမှုန့်သည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးအတော်လေးစျေးကြီးသောဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သော်လည်းသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကို၎င်း၏ကြီးမားသောစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ NMN အမှုန့်၏မြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည်ရှည်လျားသောအကျိုးကျေးဇူးများစာရင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ NMN ထုတ်လုပ်သူအများစုအတွက်အတော်လေးအကုန်အကျများသည့်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်၏စျေးကြီးသောသဘောသဘာဝအရ၊ သင်အွန်လိုင်းမှ NMN ၀ ယ်လျှင်အထူးသဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရောင်းချသူများထံမှစစ်မှန်သောထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ယူသင့်ကြောင်းသေချာစေသင့်သည်။
NMN အားဖြည့်ဆေးများသည်ယနေ့ခေတ်တွင် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်၊ ဇီဝဗေဒပညာရှင် David Sinclair သည်လည်းသူ၏ဤဗီတာမင် B3 မှဆင်းသက်လာသော nucleotide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာပြီးသူ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားသုံးစွဲခဲ့သည်။
NMN သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်၊ ကိုယ်ခံအားနှင့်ဟော်မုန်းလမ်းကြောင်းများမှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သော coenzyme ဖြစ်သော NAD+ ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ NAD+ ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၌ပါ ၀ င်သောအခန်းကဏ္ဖြစ်သည်။ NAD+ သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်အသက်အရွယ်တစ်ခုတွင်စွမ်းအင်အဆင့်သိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။ NMN ဖြည့်စွက်စာသည်ခန္ဓာကိုယ်၌ NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်တိုးခြင်းကိုကူညီနိုင်သည်။
NMN တွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ နှလုံး၊ သိမြင်မှု၊ သွေးလည်ပတ်မှုနှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းကဲ့သို့အခြားအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသက်အရွယ်ရွယ်ရွယ်များ၌ NMN ဖြည့်စွက်စာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများနှင့်အချက်အလက်များကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
NMN ၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်သိသာထင်ရှားသည့်အန္တရာယ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများမရှိကြောင်းဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ မင်းကမင်းရဲ့အသက်အရွယ်ကိုမင်းအမီလိုက်နေပြီးလူငယ်တွေရဲ့စမ်းရေကိုသောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင် NMN ဖြည့်စွက်စာကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
 Tarragó MG၊ Chini CC၊ Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, et al ။ (မေလ 2018) ။ “ + Decline” ဆဲလ် metabolism ။ 27 (5): 1081-1095.e10 ။ Doi: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016 ။ PMC 5935140. PMID 29719225 ။
 Stipp: D (မတ်လ 11, 2015) ။ "Resveratrol အပြင်: အိုမင်းခြင်းဆန့်ကျင် NAD Fad" ။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်ဘလော့ကွန်ယက်။
 Cambronne XA, Kraus WL (အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀) ။ "+ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆဲလ်ထဲမှာပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် Functions များ" ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2020 (45): 10-858 ။ Doi: 873 / j.tibs.10.1016 ။ PMC 2020.05.010. PMID 7502477 ။
 Bogan KL, Brenner C (2008) ။ “ နီကိုတင်းအက်ဆစ်၊ နီကိုတင်းနိုက်နှင့်နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုက် - လူ့အာဟာရအတွက် NAD + ရှေ့ပြေးဗီတာမင်များကိုမော်လီကျူးအကဲဖြတ်ခြင်း” ။ အာဟာရ၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်။ ၂၈: ၁၁၅–၃၀ ။ Doi: 28 / annurev.nutr.115 ။ PMID 30 ။
 Yue Yang, အန်တိုနီအေဆော့ဗ်။ NAD + ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု - ကုထုံးအတွက်ဇီဝအင်ဂျင်နီယာ၊ Biochim Biophys Acta, 2016; Doi: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014 ။
 Mills KF၊ Yoshida S၊ Stein LR, Grozio A၊ Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI တို့ဖြစ်သည်။ Nicotinamide Mononucleotide ၏နှစ်ရှည်အုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်များအတွင်းသက်ရှိဇီဝကမ္မဆိုင်ရာကျဆင်းမှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ ဆဲလ် Metab, 6; Doi: 2016 / j.cmet.10.1016 ။
 Niels ဂျေ Connell, Riekelt အိပ်ချ် Houtkooper, ပက်ထရစ် Schrauwen ။ NAD + ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကျည်ဆံကိုတွေ့ပြီလား။ Diabetologia, 2019; Doi: 10.1007 / s00125-019-4831-3 ။
 အမ်းကက်ထရင် -Hopp၊ ပက်ထရစ်ဂူတာ၊ NAD + နှင့် ADP-Ribosylation မှဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်စဉ်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ ဆဲလ်, 8; Doi: 2019 / cells10.3390 ။
 Shuang Zhou, Xiaoqiang Tang, Hou-Zao Chen ။ Sirtuins နှင့်အင်ဆူလင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Endocrinol တပ် ဦး (Lausanne), 2018; Doi: 10.3389 / fendo.2018.00748 ။